Madaxwayne Ku Xigeenka Somaliland oo Jaaliyada Somaliland ee Magaalada Manchester kala qayb galay xaflada 18ka May oo si wayn loo soo abaabulay (Daawo Sawirada) | Salaan Media
Madaxwayne Ku Xigeenka Somaliland oo Jaaliyada Somaliland ee Magaalada Manchester kala qayb galay xaflada 18ka May oo si wayn loo soo abaabulay (Daawo Sawirada)
Published: 27/05/2013 @13:59
Waxaa maanta ka dhacayday magaalda manchester ee dalkan britain xaflad si wayn loo soo abaabulay oo loogu dabaal degayay munaasibada 22 guurada gooni isu taaga somaliland, xafladan oo ahayd tii ugu waynayd ee nooceeda ah ee lagu qabto magaaladan manchester, ayaa waxaa ka kala soo qaybgalay jaaliyada somaliland ee magaalada manchester wafti balaadhan oo uu hogaaminayo madexwayne ku xigeenka somaliland mudane cabdiraxmaan cabdilaahi ismail (saylici),ayna ka mid yihiin gudoomiye kuxigeenka 1 aad ee xisbiga kulmiyie mudane maxamed kaahin axmed, wakiilka somaliland ee qaarada yurub, agaasimaha guud ee tv ga qaranaka somaliland iyo marti sharaf kale.
Munaasabada xafladan oo ay daadihinayeen mudane maxamed xabuun (jawte) iyo maxamed saleeban oo ka mid ahaa masuuliyiintii isku soo duba riday munaasabada, waxaa ugu horaynba munaasabada lagu soo dhaweeyay ismail goox oo ka waramay ujeedada munaasabida iyo qiimaha ay ugu fidhido shacbiwaynaha somaliland gaar ahaan reer manchester. Waxaa kale oo munaasabada kalmado kala duwan ka soo jeediayay Masuuliyiinta jaaliyada osmaliland ee magaalooyinka manchester iyo bolton oo uu horkacayay cabdiraxmaan awliyo oo isagu ku hadlayay magaca jaaliyada somland ee bolton , iyo cali ciise oo isagu ka warbixiyay jaaliyada somaliland ee magaalda Manchester.
Ugu danbanaybtiina waxaa microphonka mid mid loogu oo dhaweeyay masuuliyiintii heer qaran ee uu hogaaminayay madaxwayene kuxigeenaka somaliland mudane cabdiraxmana cabdilaahi ismail saylici. Iyadao oo ugu horayntiiba microphonka lagu soo dhaweeyay agaasimaha guud ee tv qaranka somaliland mudane cabdiraxmaan maxamed aaden oo ka waramay qiimaha maalintan iyo sida loogu baahanyay in saxaafada somaliland ay uga qayb qaatado, kadibna waxaa lagu soo dhaweeyay wakiilka somaliland ee qaradan yurub mudane cali aaden cawaale oo isaguna aad ugu dheeraaday sida loogu baahanyahay in jaaliyada somaliland ee qaradan yurub la isugu xidhi lahaa. Inataa kadib waxaa hadalkii lagu wareejiyay gudoomiye ku xigeenka 1aad ee xisbiga kulmiye mudane maxamed kaahin axmed, oo isaguna aad ugu dheeraaday sida loogu baahanyah in bulshawaynta somaliland ee qurbuhu ay ahaadaan qaar ku xidhan dalkoodi hooyo, iyo sida ay lagama maarmaanka u tahay in ay ilaashadaan dhaqankooda iyo diintooda iyo dadnimadoodaba.
Kadibna waxaa microphonka lagu soo dhaweeyay madaxwayne ku xigeenka somaliland mudane cabdiraxmaan cabdilaahi ismail saylici oo markii magaciisa la sheegay ay dadkii goobta fadhiyay bilaabeen sacab iyo durbaan aan kala go lahayn, madaxawaynaha oo qudbadiisu soo gabagabaynaysay muunaasabadii aayaa aad ugu dheeraday horumarka jamhuuriyda somaliland ku talaabsatay mudadii ay jirtay ee ay qarannimadeeda dib ula soo laabatay. Waxaanu carabka ku adkeeyay sida dawladaha reer galbeedka ay maalinba maanlinta ka dabaysa ugu soo dhiiranayaan si ay maalgashi ugu sameeyaan dalka somaliland. Waxaa kale oo uu ka waramay halka ay marayaan arimaha qodista shidaalka laga baadhayo somaliland .
Ugud danbayntiina wuu aad uga mahadceliyay sidii ficnayd ee loogu soo dhaweeyay magaalada manchester.
Xafladan oo ay dhextaal u ahayd heeso wadaniya oo ay soo bandhigeen qaar ka mid ah fanaaniinta somaliland oo uu horkacayay fanaanka codka toolmoon ee reer manchesster axmed dhaga iyo fanaaniin kale.
Xafladan oo ahayd mid aad u qiimo badan, isla markaana ahayd tii ugu qiimha badnayd ee lagu qabto magaalda manchester ayaa waxaa xil iska saaray oo soo abaabulay mahadeedana isla leh xubnahan hoos ku qoran
Maxamed xabuun( jawte)